राजधानीमा दैनिक १२ हजार यातायातका साधन गुड्छन् ! (भिडियो) « Khasokhas Follow @khasokhasmag
राजधानीमा दैनिक १२ हजार यातायातका साधन गुड्छन् ! (भिडियो)
काठमाडौं ७ असार । देशको राजधानी । लामो समयसम्म काठमाडौंबाटै देशको शासन व्यवस्था संचालन भयो । त्यसैले सेवा सुविधा र अवसर पनि काठमाडौंमै केन्द्रित भयो । स्वभाविक मान्नुपर्छ, धेरै मानिस अवसर खोज्दै काठमाडौं आउनेक्रम अहिले पनि जारी नै छ ।
जनघनत्व बढ्दै जादा जीवन यापनका लागि आवश्यक स्रोत साधनको संख्या पनि बढ्ने नै भयो ।
राजधानीमा बसोबास गर्ने प्रत्येक मानिससग कुनै न कुनै किसिमका यातायातका साधन छन् । सार्वजनिक यातायातका साधनको भरपर्दो व्यवस्था नहु“दा राजधानीमा निजी यातायातको साधनको संख्या उतिकै मात्रामा बढेको छ ।
जनघनत्व बढी हुनु, साघुरा सडक र वैकल्पिक मार्गको अभावमा राजधानीमा यातायातका साधनको व्यवस्थापन मुख्य चुनौती बन्दै गएको छ ।
क्षेत्रफलको हिसावले काठमाडौं उपत्यका सानो मानिन्छ । तर, उपत्यकाको जनसंख्या २५ लाख भन्दा बढी छ ।
त्यति मात्र होइन विभिन्न जिल्लाबाट आएर काठमाडौंमा जीवन यापनको क्रममा रहेकाहरुको संख्या जोड्ने हो भने काठमाडौंको जनसंख्या अरु आधा थपिन सक्छ । काठमाडौंमा बसोबास गर्ने हरेक मानिससंग कुनै न कुनै यातायातका साधन छ ।
सार्वजनिक यातायातका साधनको उचित व्यवस्थापन नहुँदा काठमाडौंमा बसोबास गर्ने मानिस निजी साधन प्रयोग गर्न बाध्य छन् ।
बागमती अञ्चलमा मात्र ९ लाख ६३ हजार यातायातका साधन दर्ता भएका छन् । तर, बाहिर दर्ता भएका र जिल्लाबाट आउने यातायातका साधन सहित काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक १२ हजारको हारहारीमा यातायातका साधन गुड्छन् ।
राजधानीमा यति धेरै साधन भएर पनि ठूला र सार्वजनिक यातायातका साधन भने निकै कम छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालयका अनुसार काठमाडौंमा हाल १ लाखको हारहारीमा मात्र ठूला सार्वजनिक यातायातका साधन छन् ।
३ लाखको हारहारीमा साना दुई पाङ्ग्रे यातायातका साधन गुड्ने क्षमता भएको उपत्यकाको सडकमा ८ लाखको हारहारीमा मोटरसाइकल गुड्छन् ।
अधिक मानविय चाप र दैनिक जीवन यापनका लागि यातायातका साधन प्रयोग गर्नै पर्ने बाध्यताले राजधानीमा यातायातका साधनको संख्या बढ्दै गएको छ ।
सडकको राम्रो व्यवस्थापन हुन नसक्नु र भरपर्दो सार्वजनिक यातायातका साधनको व्यवस्था नहुनाले उपत्यकामा दिनानुदिन निजी यातायातका साधन थपिने गरेको यातायात व्यवस्था कार्यालयको भनाइ छ ।
राजधानीका सडकमा दैनिक १२ लाखको हारहारीमा यातायातका साधन संचालनमा रहने भएता पनि यात्रुले सहज रुपमा यातायातका साधनको उपयोग गर्न पाएका छैनन् । विशेष गरेर कार्यालय सुरु हुने समय र कार्यालय बन्द हुने समयमा कुनै सडक खाली हु“दैनन् ।
गन्तव्यसम्म पुग्न कुनै पनि यात्रुले सहज रुपमा यात्रा गर्न पाउँदैनन् । त्यसैले राजधानीमा यातायातका साधनको व्यवस्थापन र यात्रुका लागि सहज यात्राको वातावरण बनाउन निक्कै मुस्किल देखिन्छ ।
हुन त राजधानीमा हिडेरै पनि दैनिक काम सम्पन्न गर्न सकिने व्याख्या गरिन्छ । तर, पछिल्लो समय मानिसको बढ्दो व्यस्तताका कारण हिडेरै सबै काम सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
त्यसैले, यातायातका साधन प्रयोग अनिवार्य बनेको छ । यातायातका साधनको प्रयोग अनिवार्य भएस“गै राजधानीमा यातायातका साधनको चाप बढेको छ ।
केही मानिसले रहरले यातायातका साधन खरिद गरेपनि अधिकांश मानिस बाध्यतामा छन् ।
बाध्यताले धेरै मानिसले यातायातका साधन खरिद गरेका छन् ।
आज, तिनै यातायातका साधनको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । यातायातका साधनको व्यवस्थापन त्यति सहज छैन । राजधानीमा यातायातका कति साधन भए ठीक होला ?
भिडियोमा हेुर्नस् …